Cliniclọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị nso m 2022 maka mmịpụta, nyocha na nhicha
By Victoria Akpan TMLT December 17, 2021 Health 0 Comments
- ụlọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị nso m 2022 -
Ọ bụrụ na ị na-agbasi mbọ ike ịkwụ ụgwọ maka nlekọta eze, ị nwere ike ịtụle ịga ụlọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị gị nso maka ịwepụ nha nha n'efu, nyocha oge niile, ma ọ bụ ihicha.
Iji chọpụta ihe niile gbasara ụlọ ọgwụ eze n'efu na otu esi enweta nlekọta eze n'efu, gụọ na njedebe.
Mgbaàmà eze nwere ike ime ka ị chọọ ụlọ ọgwụ eze efu
Mgbaàmà eze nwere ike iso akara ndị ọzọ, ha dabere na ọnọdụ mgbọrọgwụ, nsogbu, ma ọ bụ ọnọdụ ahụike. N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbaàmà ndị na-emetụta ezé nwere ike imetụta akụkụ ahụ dị iche iche.
Agbanyeghị, mgbaàmà eze nwere ike ime yana yana akara ndị ọzọ na-emetụta ọnụ dịka
Bad ume (halitosis)
Mgbanwe na uto
haze ma ọ bụ hapụ
Achịcha na-ala azụ
Ọzịza, ọbara ọbara, ma ọ bụ ọbara ọgbụgba sitere na chịngọm
Cliniclọ ọgwụ eze efu efu nọ nso m 2022: Mgbaàmà ndị ọzọ
Mgbaàmà eze nwere ike iso akara ndị metụtara sistemu ahụ dị iche iche dịka:
A na-anụ mkpọtụ mkpọpụta ma ọ bụ ịpị mgbe emechiri ma ọ bụ mepee ọnụ
Kpochapụ imi dị nro na-acha aja aja, odo ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Nchegbu sitere na mmetụta uche
Ọnụọgụ lymph nke buru ibu
Mmetụta ọrịa izugbe
Mgbu akwara na ihu
Imi imi na imi imi
Mgbaàmà dị egwu
N'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike ijikọta nsogbu eze na ihe ịrịba ama ndị ọzọ nwere ike igosi nsogbu ahụike siri ike nke a ga-enyocha ozugbo na ọnọdụ mberede.
Nweta nlekọta ahụike ozugbo (kpọ 911) ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye ọ bụla ị maara nwere mgbaàmà eze, yana ihe mgbaàmà ndị ọzọ nke ọrịa siri ike, dị ka:
Ọnọdụ uche na-agbanwe ma ọ bụ mgbanwe mberede na omume, dị ka mgbagwoju anya ma ọ bụ delirium, lethargy, eme ihe, na echiche efu
Mgbu n'obi, obi uko, mgbali obi, ede akwụkwọ
Okwu ahụ bụ "oke ahụ ọkụ" na-ezo aka na okpomọkụ dị elu (dị elu karịa 101 degrees F)
Mgbanwe n'agba agba nke a nwere ike ịhụ n'ụdị isi ike imeghe ma ọ bụ mechie ọnụ gị.
Nsogbu iku ume ma ọ bụ iku ume Ndị a gụnyere nsogbu iku ume, dị ka na nsogbu iku ume na ume iku ume iku ume ma ghara iku ume ma ọ bụ ọbụna kpagbuo
O siri ike isi ọwụwa
Ihe mgbu siri ike
Ọzịza nke agba
Trismus (enweghị ike ikwe ka agba meghee)
Cliniclọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị nso m 2022: Ihe kpatara ị jiri chọọ ụlọ ọgwụ eze efu
Ihe ịrịba ama eze na-abụkarị n'ihi ire eze, mmerụ ahụ, ma ọ bụ ọrịa. Ire eze nwere ike ibute ọrịa n'ime ma ọ bụ pulp nke eze, nke nwere ike ịkpata mgbu.
Ọrịa nwere ike ịmalite ịghọ abscesses. Ha nwekwara ike ime ka chịngọm gburugburu ezé zaa aza ma na-acha uhie uhie. Imerụ eze nwere ike ịkpata mgbu na n'ikpeazụ bute ọrịa.
Plaque nwekwara ike ịkpata gingivitis (mmetụta chịngọm na-agbanwe agbanwe) yana periodontitis (ọrịa chịngọm).
Ahụ erughị ala, iyi na dọkarịrị ezé na ezé na-adịghị mma nwere ike ịpụta site na ichicha ma ọ bụ ịchichi ezé. Na mgbakwunye, ihe mgbu na agba, yana akwara ihu, nwere ike ịpụta site n'igweri ma ọ bụ ịchịkọta.
Ahụhụ nwere ike ibute ezé mebiri emebi ma ọ bụ gbajiri agbaji na ọbụna nhụsianya eze. Ọrịa Sinus ma ọ bụ ntị nwekwara ike ịkpata eze mgbu na enwere ike na-ejikọta ya na akara ndị ọzọ, ihe ngosi nke a obi ọgụ.
Ọrịa ndị ọzọ nwekwara ike ịkpata mgbaàmà eze.
Mgbaàmà eze nke chọrọ ụlọ ọgwụ eze efu
Ụfọdụ nsogbu eze nwere ike ịpụta site n'ụdị dị iche iche na-ebute ire ere, gụnyere:
N'etiti nri nri
Ịṅụ mmanya ma ọ bụ iri nri ndị nwere shuga ma ọ bụ starch
Iri nri nnyapade
Nlekọta eze ezughi oke
Ịdị ọcha eze na-adịghị mma mgbe niile gụnyere ịghara ịsa ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa ugboro ugboro
Cliniclọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị nso m 2022: Ihe na-efe efe na ihe na-efe efe nke mgbaàmà eze
Mgbaàmà eze nwere ike pụta site na mbufụt nke ihe ndị metụtara ya, gụnyere:
Gingivitis (mbufụt nke goms na anụ ahụ gbara ezé gburugburu)
Oge mgbochi (ọrịa chịngọm)
Sinusitis (mbufụt ma ọ bụ sinus ọrịa)
Cliniclọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị nso m 2022: Ihe kpatara eze mgbu maka ụlọ ọgwụ eze efu efu
Traumas, dị ka nwekwara ike ịkpata mgbaàmà nke ire eze:
Na-ata ihe siri ike
Na-asachapụ nke ọma
Ọ bụ ọnọdụ a maara dị ka bruxism (ịcha eze) ma ọ bụ imechi agba
Mmerụ ọnụ ma ọ bụ agba
Ọtụtụ ọnọdụ na omume nwere ike ịkpata nsogbu eze, gụnyere:
Mmanya, tii, ma ọ bụ kọfị
Gastroesophageal Reflux Ọrịa ( GERD)
Genetic anomalies nke eze enamel
arịa ọrịa kansa ọbara (cancer na ụmị ọkpụkpụ ma ọ bụ ọbara)
Na-egosiputa fluoride ka oge na-aga
Phenytoin (ọgwụ antiseizure nke nwere ike ime ka ọzịza chịngọm)
Rịketị ( osteomalacia na ụmụaka n'ihi Enweghị vitamin D)
Tetracycline ikpughe tupu afọ 8
N'ọnọdụ ụfọdụ, akara eze nwere ike igosi ihe dị nso ma ọ bụ nke na-eyi ndụ egwu nke a ga-enyocha ozugbo na ọnọdụ mberede. Ha gụnyere:
Eze agbajiri agbaji ma ọ bụ kụpụrụ
Osteomyelitis (ọrịa ọkpụkpụ) nke agba agba, ma ọ bụ ala ma ọ bụ elu.
Ịchọpụta ihe kpatara mgbaàmà eze na ụlọ ọgwụ eze efu
Iji chọpụta ihe kpatara nsogbu gị Dọkịta gị ma ọ bụ ọkachamara ahụike nwere ikike ga-ajụ gị ọtụtụ ajụjụ gbasara mgbaàmà ezé gị, gụnyere:
Kedu ụbọchị mbụ ị hụrụ ihe ịrịba ama nke ire eze?
Kedu ụdị akara eze ị na-enwe?
Ị nwetụla mmerụ ahụ ma ọ bụ mmerụ ahụ n'agba gị ma ọ bụ ọnụ gị?
Ọ dịtụla mgbe ejidere gị ka ị na-egwe ọnụ ma ọ bụ na-atachi ezé gị?
Kedu oke mgbaama gị?
Ọ nwere ihe ọ bụla na-eme ka mgbaàmà gị pụọ ma ọ bụ na-akawanye njọ?
Kedu nri gị?
Ị na-enweta mgbaàmà ndị ọzọ gafere akara ngosi eze?
Kedu mgbe ikpeazụ nyocha eze?
Ị nweburu nsogbu eze?
Kedu ọgwụ ndị ị na-aṅụ?
Cliniclọ ọgwụ eze efu efu nọ nso m 2022: Nsogbu eze nwere ike ịnwe nke chọrọ ụlọ ọgwụ eze efu efu
Ọnwụ nke ezé bụ ihe ga-esi na nsogbu eze pụta, Otú ọ dị, a na-egbochi ya ma ọ bụrụ na achọpụtara ma mesoo okwu n'oge kwesịrị ekwesị.
Ọbụlagodi eze a kụjisịrị nwere ike ịzọpụta. Iji mee ka ohere nke a dịkwuo mma, ị ga-echekwa ezé gị site n'itinye ya na ebe iru mmiri ma ọ bụ n'ọnụ gị mgbe enwere ike ma nweta ọgwụgwọ ozugbo.
Dị ka ezé gbajiri agbaji, ịkwesịrị iji akwa dị jụụ kechie akụkụ ndị mebiri emebi wee nweta ọgwụgwọ ozugbo.
Ọ bụrụ na agwọghị ya, oghere nwere ike ịmalite ịghọ ezé na-esighi ike ma nwee ike gbasaa ọrịa ahụ n'anụ ahụ dị n'akụkụ. Ọrịa ndị na-esi na ya pụta nwere ike ịdị njọ.
Mgbaàmà nke eze nwere ike ịpụta ma ọ bụ bute ọrịa siri ike Na enweghị ọgwụgwọ, ọ nwere ike ibute nnukwu nsogbu yana mmerụ ahụ na-adịgide adịgide.
Mgbe achọpụtara ihe kpatara ya, ọ dị oke mkpa ịgbaso usoro ọgwụgwọ gị na ọkachamara ahụike gị mepụtara kpọmkwem maka gị ka ibelata ohere nke ịmepụta nsogbu, dịka:
Cellulitis (ọrịa nke anụ ahụ na anụ ahụ dị n'okpuru)
A maara ọnọdụ ahụ dị ka endocarditis (ọrịa nke oyi akwa dị n'ime obi ma ọ bụ valves nke obi)
Ludwig's angina (mbufụt nke anụ ahụ dị n'okpuru ire, n'ala ọnụ)
Mediastinitis (ọrịa n'ime akụkụ nke etiti n'ime obi)
Sepsis (ọrịa ọbara na-eyi ndụ egwu nke nje bacteria kpatara)
Ọrịa ahụ na-agbasa n'akụkụ dị iche iche nke ahụ dị ka ụbụrụ ma ọ bụ ngụgụ
Ụdị nsogbu eze abụọ bụ isi
Nsogbu eze na-adaba n'ụdị abụọ: ire eze na ọrịa chịngọm. Dọkịta ezé gị nwere ike inyere gị aka ịlụso nsogbu abụọ a ọgụ. Chọpụta ihe ebe a.
ire eze eze: Ire ezé bụ mfu nke enamel n'ígwé ezé (enamel yana dentin). Ọ na-eme mgbe ihe oriri nwere carbs (sugar yana starch) dị n' ezé. Nje bacteria dị n'ime ọnụ na-eri nri ndị a. Ha na-emepụta acids nke nwere ike ime ka enamel eze bibie ma mee ka ezé ezé. Ire eze nwere ike ime n'oge ọ bụla.
Ọrịa chịngọm: Ọrịa chịngọm (periodontal) bụ ọrịa nje na-adịgide adịgide nke na-emetụta chịngọm na ọkpụkpụ na-akwado ezé. Gingivitis bụ ụdị ọrịa chịngọm siri ike nke na-emetụta naanị chịngọm. Agbanyeghị, gingivitis nwere ike ibute ọrịa chịngọm siri ike karị, nke a maara dị ka periodontitis.
Ụmụaka chọrọ ụlọ ọgwụ eze efu?
Ahụ ike eze nke ụmụaka dịkwa oke mkpa. Ị nwere ozi ndị a?
42% nke ụmụaka ndị dị afọ abụọ ruo 11 nwere ma ọ dịkarịa ala otu oghere ma ọ bụ njuputa.
23% nke ụmụaka dị afọ abụọ ruo afọ 11 nwere oghere eze anaghị agwọta ya
21% nke ndị dị afọ 6 ruo 11 na-ata ahụhụ site na ire ere na-adịgide adịgide.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ́ ndị dị n'agbata afọ 12 ruo 19 nwere opekata mpe otu oghere a na-agwọbeghị.
Ọrụ eze mberede na ụlọ ọgwụ eze efu
Nsogbu goms na ezé adịghị echere ịzụlite ruo mgbe oge bụ oge kwesịrị ekwesị. Ọrụ mberede eze nwere ike inye enyemaka ozugbo site na nhụjuanya nke mgbu eze.
Ọ chọrọ ụdị enyemaka a ma ọ bụrụ na ị nweghị ike idozi mgbu ị na-enwe. Enwere ọtụtụ ụlọ ọgwụ eze na-enye nlekọta eze mberede iji mee ka ahụ erughị ala.
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ọnụ Onye dọkịta ezé mberede a zụrụ nke ọma nwere ike inye aka. Okwu ole na ole enwere ike idozi site na ụlọọgwụ eze mberede bụ:
Ọrịa eze na mberede na nke a na-atụghị anya ya
Ịkụnye eze: Nsogbu
Ọgwụgwọ ọwa mmiri
Uru nke Mberede efu na Ọgwụ Ọgwụ
Tupu ị ghọta uru ọgwụgwọ eze mberede dị na mbụ, ị ga-amarịrị ụzọ isi gbanarị ihe mberede eze dịka:
Mgbanwe na ọdịdị ezé
Ịnọgide na-enwe nlekọta ọnụ
Gbaa mbọ hụ na ị na-edochi ahịhịa eze gị ugboro ugboro.
Ibelata oriri shuga
Ọbụna ma ọ bụrụ na anyị na-agbaso usoro ndị a dị mma, ihe mberede ka ga-eme. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe mberede ihu na eze gị, enyemaka ozugbo dị oke mkpa.
Enwere ọtụtụ uru na nlekọta eze mberede. Nke a bụ ụfọdụ uru kacha mma.
1. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Na-azọpụta Oge
Otu n'ime uru ndị a kacha mara amara nke nlekọta eze mberede bụ eziokwu na ọ nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe ịchekwa oge.
Ọ dịghị mkpa ichere n'ahịrị ogologo na ụlọ ọgwụ eze iji nweta ọgwụgwọ maka nsogbu eze gị.
N'ihi ya, ọ dịghị ihe a chọrọ iji wepụta oge dị ukwuu n'ọrụ. Nke a pụtakwara na ị naghị enwe mgbu ruo mgbe ụlọ ọrụ dọkịta ezé gị ga-emeghe.
2.Free Dental Clinic nso m 2022: Nnweta ozugbo
Enwere ọtụtụ nsogbu eze na-eme na mberede. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ezé tufuo gị n'oge egwuregwu baseball ma ịchọrọ nlebara anya ozugbo nke ndị ọkachamara ahụike eze.
Ị gaghị enwe ike ịnọdụ ala na ezé na-efu ogologo oge nke ụbọchị ahụ. Otu uru dị na ịnweta ọrụ eze mberede bụ na ọ na-enye gị ọgwụgwọ ngwa ngwa ma dị irè. Nke a na-enyere aka igbochi nsogbu eze ịmalite.
3. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Nyochaa Nsogbu ahụ
Ọ bụrụ na ị na-enwe ahụ erughị ala n'ihi mgbu eze, ị maghị ihe na-akpata ahụ erughị ala ahụ. Okwu gbasara okwu eze bụ na ha nwere ike ịdị njọ karịa mgbe okwu ahụ pụtara na mbụ.
Ụzọ kachasị mma iji chọpụta isi nsogbu gị bụ iji ọrụ mberede eze.
Mgbe dọkịta ezé na-ekpebi ihe na-adịghị mma, dọkịta ezé nwere ike inyere gị aka dozie nsogbu ahụ ma chọpụta nhọrọ nlekọta kacha mma.
Opekempe, onye na-ahụ maka ahụike eze mberede ga-enye gị echiche doro anya nke ihe ị ga-emerịrị.
4. Chekwaa ezé gị
Uru nke ọrụ nlekọta eze mberede gụnyere ibelata ihe ize ndụ ịla n'iyi eze gị.
Nke a bụ na ha na-agbajikwa ọzọ dị oké mkpa ma ọ bụrụ na ezé gị ma na a obere ma ọ bụ zuru ezu ụzọ. Ndị ọkachamara nwere ike ịnye aro maka otu esi ejikwa na ilekọta ezé gị.
5. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Nyere Onwe Gị Aka Zere Ihe mgbu ahụ
Ọ bụrụ na ị na-enweta ọzịza n'ihi ihe mberede ọ ga-ekwe omume na mgbu ahụ dị njọ. N'agbanyeghị na ị nwere ike ijikwa ya na ọgwụ ndị a na-ere ọgwụ, ị ga-enwe mgbu ruo mgbe ị gara leta onye dọkịta ezé nwere ahụmahụ.
Ndị ọrụ mberede eze na-ekpebi ihe a ga-eme iji wepụ ahụ erughị ala ahụ wee hụ na nkasi obi gị dị.
Ogologo oge na-egbu oge nwere ike ime ka okwu dị mgbagwoju anya karịa ebe ọ bụ na ọtụtụ nsogbu eze nwere ike ịkpalite nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na a naghị edozi ya ngwa ngwa.
Ihe Mere I Ji Kwesị Chọọ enyemaka nke ọrụ eze mberede
Uru nke ọrụ nlekọta eze mberede na-abụkarị ngọzi. Ọ bụrụ na ịnwee nsogbu eze na-agaghị ekwe omume, ịchọ ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị dị mkpa.
Nke a ga-enyere gị aka ịgbake ngwa ngwa ma nye gị ohere ibi ndụ gị ruo oke.
Ewezuga ọrụ mberede eze anyị, anyị nwere obi ụtọ ịnye ndị ọzọ ọrụ, dị ka:
Sealants na eze njuputa
Ọgwụgwọ na fluoride
Na-ehicha ezé gị
Akara eze na okpueze
Ihe Mere I Kwesịrị Iji gaa na ụlọ ọgwụ eze
1. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Iji gbochie ọrịa kansa ọnụ
Dabere na The Oral Cancer Foundation, otu onye na-anwụ site na ọrịa kansa ọnụ na nkeji ọ bụla na United States naanị.
Ọ bụrụ na ịga maka nyocha eze, dọkịta ezé na-elele gị maka ọrịa kansa ọnụ. A na-agwọ ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na achọpụtara ya n'oge mmalite.
2. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Iji gbochie ọrịa chịngọm
Anyị nwere ike ịkọwa ọrịa chịngọm dị ka ọrịa nke anụ ahụ chịngọm na ọkpụkpụ na-edobe ezé anyị n'ọnọdụ ha. Ọ bụ otu n'ime isi ihe na-akpata ịla azụ n'oge okenye. Ọ bụrụ na achọpụtara ya n'oge zuru oke, enwere ike ịtụgharị ya ma gwọọ ya.
Ọ bụrụ na ewereghị ọgwụgwọ ahụ n'oge, ọnọdụ ọrịa chịngọm ka njọ na nke dị elu nwere ike ịpụta.
Nchacha eze na-eme atụmatụ mgbe niile na nyocha nke ịsa ahịhịa mgbe niile, yana ịsa ahịhịa ugboro abụọ kwa ụbọchị dị oke mkpa iji gbochie ọrịa chịngọm.
3. Ọ Na-edobe Ezi ahụike anụ ahụ n'ozuzu ya
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya ejikọtawo ọrịa strok na nkụchi obi na ọrịa chịngọm, bụ nke na-esite na adịghị ọcha ọnụ ezughị ezu.
Nnyocha eze mgbe niile kwa ọnwa isii nwere ike inye aka mee ka chịngọm na ezé gị dị mma ma nwee ike belata ohere ị nwere ịta ahụhụ site na ọrịa strok na ọrịa obi.
4. Ụlọ ọgwụ eze efu na-adịghị nso m 2022: To mee ka eze di ike
Ebe ọ bụ na ọrịa chịngọm so na ihe ndị bụ isi na-akpata ọnwụ ezé maka ndị okenye, nyocha eze ugboro ugboro na ịsa ahịhịa, na ịhịa aka dị mkpa iji nọgide na-enwe ezé kachasị ike.
Idebe ezé gị bụ ihe dị mma. Ọ na-eme ka ike ịta nri gị dịkwuo mma ma na-emecha nwee ahụ ike.
5. Iji chọpụta nsogbu eze n'oge
Dọkịta ezé na onye na-ahụ maka ịdị ọcha ga-enwe ike ịchọpụta ihe mgbaàmà mbụ nke nsogbu gbasara chịngọm ma ọ bụ ezé gị.
A na-agwọkwa oghere eze ndị achọpụtara n'oge juputara na ndochi gbajiri agbaji na ọrịa chịngọm. Ọ bụrụ na ejighị ịwa ahụ chịngọm edozi nsogbu ahụ, mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na mmịpụta eze nwere ike bụrụ naanị nhọrọ ọgwụgwọ a ga-atụle.
6. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Iji nọgide na-enwe ezi ahụike ọnụ
Dọkịta na-ahụ maka ahụike eze gị nwere ike inye aka n'ịhụ na ị na-elekọta ahụike ọnụ gị site n'iji anya na-enyocha ọnụ gị ma jiri ya tụnyere nyocha ahụike eze gị gara aga.
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị usoro gị na usoro ịdị ọcha nke ọnụ gị, onye na-ahụ maka ịdị ọcha gị nwere ike ịlaghachi n'ụzọ.
7. Iji Jiri Atụmatụ eze gị
Atụmatụ mkpuchi eze na-enye niile ma ọ bụ ọtụtụ ụgwọ maka ịdị ọcha eze na ule kwa ọnwa isii.
Rite uru site na onyinye a ma chekwaa ego n'ọdịnihu site na ịzere usoro eze dị oke ọnụ nke na-akpata site na adịghị ọcha eze ezughị oke.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ụgwọ mkpuchi, tụlee atụmatụ eze dị ọnụ ala nke na-efu naanị dollar ole na ole kwa ọnwa. Ị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ dị ala karịa maka usoro gị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ihicha abụghị kpamkpam n'efu, ọ dị ọnụ ala mgbe ị nwere ego. Ọnụ ego ahụ ga-abawanye mgbe ị kwụsịrị ijide n'aka na ị ga-elekọta ihe ndị a tupu oge eruo.
8. Iji Mepụta Atụmatụ ọgwụgwọ
Ọ bụrụ na dọkịta eze gị achọpụta nsogbu n'ọnụ gị. O yikarịrị ka ọ ga-enye gị usoro ọgwụgwọ.
Atụmatụ ọgwụgwọ ahụ aghaghị ịgụnye ụgwọ ọrụ maka usoro ọ bụla ị ga-achọ ka i wee nwee ike iji oche ihu kwurịta ndokwa gbasara ego.
9. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Nwee ọchị na-acha ọcha, na-egbuke egbuke
Dọkịta eze nwere ike wepụrụ ọtụtụ kọfị, ụtaba, na ntụpọ tii.
N'oge ị na-ehicha ihe, onye na-ahụ maka ịdị ọcha gị nwekwara ike ịcha ezé gị, na-enye ha ọmarịcha. Nsonazụ ahụ? Amụma na-egbuke egbuke ma na-acha ọcha!
10. Iji gbochie iku ume
Ọmụmụ ihe gbasara eze na-ekpughe na ihe dịka pasentị 85 nke ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na iku ume mgbe niile nke a makwaara dị ka halitosis. nsogbu eze nke .
Ịkwado ahụike ọnụ nke ọma dị mkpa iji zere isi ísì. Nchacha na nlele ndị a na-ahazi mgbe niile bụ ụzọ kacha mma iji hụ na ị na-edobe ịdị ọcha ọnụ nke ọma.
Ịmụmụ ọnụ ọchị nke mara mma nwere ike inyere gị aka imeghe ọnụ ụzọ ma nyere gị aka ime ka ahụ dị gị mma mgbe ị banyere.
Ịdị ọcha eze dị mkpa maka ahụike gị dum na chịngọm na ezé gị ga-enwe ekele maka ya ugboro ugboro. Jiri ohere ị nwere pụọ na ịmụmụ ọnụ ọchị. Ọ bụ naanị otu ị nwere.
11. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Gbochie nsogbu ahụike siri ike
Nsonaazụ nke enweghị ịdị ọcha eze nwere ike ịgafe gingivitis.
Enwere njikọ ekwenyesiri ike n'etiti ọrịa chịngọm na ọrịa obi na ọrịa chịngọm nwere ike ikwu na enwere ike ịmụ nwa n'oge ime ime maka ụmụ nwanyị.
Na mgbakwunye, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa sistemu niile nwere akụkụ nke ọnụ. Nke a gụnyere ọrịa shuga, ọrịa kansa ọnụ, na ọrịa akụrụ.
12. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Mee ka ntụkwasị obi dịkwuo elu
Enweghị ọgwụgwọ eze kwesịrị ekwesị nwere ike ịpụta ìhè ka oge na-aga. Ọrịa chịngọm na ire eze nwere ike ime ka ezé na-acha odo odo na mfu nke ezé, ume na-esi ísì yana ọbụna mebie ezé.
Mmetụta nke okwu ịchọ mma ndị a nwere ike belata obi ike gị ma mee ka ahụ ghara iru gị ala maka ọdịdị gị.
Ịdị ọcha eze mgbe niile nwere ike izere ọtụtụ n'ime mmebi ndị a, na mmebi ọ bụla dị ugbu a nwere ike idozi.
13. Zenarị usoro ndị dị oke ọnụ
Nhicha na nyocha mgbe niile nwere ike ịdị ka ihe efu efu, Otú ọ dị, izere ihe ndị a nwere ike ịkpata usoro dị oke ọnụ.
Dịka ọmụmaatụ, oghere dị obere na nke dị ọnụ ala nke a na-achịkwaghị achịkwa nwere ike itolite ma chọọ okpu dị oke ọnụ ma ọ bụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ.
14. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Mbelata Mgbu
Ọtụtụ nsogbu eze na-egosipụta dị ka mgbu ọnụ n'ụdị ụfọdụ. Ihe mgbu eze na-abụkarị ihe mgbaàmà nke ọrịa ma ọ bụ nsogbu. Nnukwu eze mgbu nwere ike ịkpata ihe isi ike itinye uche na ọbụna isi ọwụwa.
Ọ bụrụ na ihe kpatara mgbu ahụ bụ ọrịa ọ nwere ike ịka njọ ma nwee ike ịkpata nnukwu nsogbu.
15. Nyocha ahụ
Mgbe ị nwere ule eze, onye na-ahụ maka ahụike eze gị nwere ike lelee oghere oghere yana enwere ike iji X-ray chọpụta ma oghere ahụ dị.
Nnwale a ga-anwalekwa maka nrụpụta tatar na plaque. Plaque bụ oyi akwa nke nje bacteria nwere ike ime ka obi sie ike wee ghọọ tartar.
Ọnweghị ụzọ isi wepụ tartar site na ịsa ahịhịa. Nke a bụ ihe kpatara na ọ dị mkpa ịga leta dọkịta eze gị iji gbochie nsogbu dịka nke a.
Ọzọkwa, a ga-enyocha anụ ahụ iji lelee maka ọbara ọbara ọ bụla, ọzịza, na akara ndị ọzọ nke ọrịa kansa.
Cliniclọ ọgwụ eze na-akwụghị ụgwọ dị nso m 2022: Ihe kpatara ịchọrọ Ụlọ ọgwụ eze efu
Na US enwere ọtụtụ mkparịta ụka gbasara ihe kpatara ọgwụgwọ eze na ahụike ji dị oke ọnụ maka nkezi mmadụ ịkwụ ụgwọ.
Ụfọdụ ndị ọkachamara kwenyere na ndị ọkachamara ahụike na-ata ụta. US nwere ndị ọkachamara ahụike gụrụ akwụkwọ na nka kacha mma. Nke a bụ ya mere o ji bụrụ ihe ezi uche dị na ya na ọrụ ndị ọkachamara a na-enye nwere ike na-eri karịa.
Ndị ọkachamara ndị ọzọ nwere akụkọ dị iche iche gbasara itinye aka na ụlọ ọrụ ịnshọransị na ụgwọ ọrụ eze.
A maara na mmemme mkpuchi ahụike ọtụtụ ndị US egosila na ọ ga-abawanye ọnụ ahịa ọgwụ na ọgwụgwọ eze abụghị ihe dị iche.
Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ dị oke ọnụ n'ụlọ ọrụ dọkịta ezé, mgbe ahụ ị nwetala ihe akpata oyi nke ịchọpụta na mkpuchi gị anaghị ekpuchi ya.
Ọbụna ndị nwere "ezigbo mkpuchi" na-akwụ ụgwọ ọtụtụ puku dollar n'akpa ha maka a eze eze.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ịnshọransị gị enweghị ike ikpuchi usoro eze ị chọrọ, ị nwere ike ịnọ na-eche ma ọ dị mkpa ọgwụgwọ eze?
Ụlọ ọgwụ eze efu vs Ọnụ Ịkụnye eze
Ego ole kwesịrị ọnụ n'uju ọnụ eze etinyere?
Edemede a bụ ntụaka iji nyere gị aka ịchọpụta ihe ị ga-atụ anya na a ga-ana gị ụgwọ maka ntinye eze. Ọnụ ego etinyere eze n'ọnụ nwere ike ịdị iche nke ukwuu.
Mgbe ịmalitere nyocha ọnụahịa nke nkwụnye eze, ị ga-achọpụta ngwa ngwa na ọnụ ahịa otu ịkụnye ihe nwere ike ịbụ ebe ọ bụla site na $1,500 ruo $6,000.
Dịka ntụnyere, ntinye maka ọtụtụ ezé nwere ike ịdị ebe ọ bụla site na $1,500 ruo $50,000.
Na-eri nke eze implants nwere ike ịpụta kama ọnụ. Ọtụtụ ndị ọrịa na-eche ma ọnụ ahịa ahụ ọ̀ bụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụ na dọkịta ezé na-eji usoro ahụ eme ihe.
1. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Otu Ụba Ịkụnye
Ọ bụrụ na etinyere maka otu nha nha nha, ọ ga-eri ebe ọ bụla site na $1,000 ruo $3000. The abutment nakwa dị ka okpueze. Agbanyeghị, ha nwere ike ịkwụ $500- $3,000 ọzọ.
Ọnụ ego a na-atụ anya ya na-adịkarị n'etiti $1,500 na $6,000. Nke a bụ ego etiti nke ndị ọrịa na-akwụ n'akpa uwe na-enweghị enyemaka sitere na amụma mkpuchi eze.
Atụmatụ ahụ gụnyere ịwa ahụ na ndụmọdụ mbụ. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ego ahụ dabere na ihe ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye ọrịa chọrọ ọtụtụ eze etinyere, ọnụahịa ya dị elu. Enwere ọtụtụ ụdị ntinye eze ịhọrọ site na ya.
Ọ dabere na mkpa nke onye ọrịa ga-ekpebi ụdị ntinye kacha mma maka ha. nhọrọ kacha dabara adaba.
2. Ịkụnye eze ọtụtụ
Nhọrọ a dị maka ndị ọrịa chọrọ ngbanwe nke ihe karịrị otu ezé. Ịkụnye na-anọchi ọtụtụ ezé nwere ike na-eri ebe ọ bụla site $1500 ruo $30,000.
Atụmatụ ahụ nwere ike si na $50,000 ruo $50,000 dabere na usoro a kapịrị ọnụ, dọkịta ezé na-arụ usoro ahụ, yana mpaghara mpaghara.
Ọ bụrụ na a ga-eji ntinye nke dị elu dochie ezé abụọ ma ọ bụ anọ, usoro a nwere ike na-eri n'etiti $6,000 na $10,000.
Dị ka usoro ọ bụla ọzọ, ọnụahịa ahụ nwere ike ịba ụba dabere na ọnọdụ kpọmkwem nke onye ọrịa na ihe ndị ọzọ.
Ha na-ejikarị ọtụtụ nha nha nha mgbe onye ọrịa ahụ gbasiri ike ma nwee ezé n'akụkụ ebe etinyere ya.
Usoro ahụ na-achọkwa ka onye ọrịa ahụ nwee chịngọm ahụ dị mma, nke ga-eme ka ihe ndị a na-etinye n'ime ya nọrọ n'ọnọdụ ziri ezi.
Na-ekpebi ọnụ ọgụgụ nke implants chọrọ ọnụ ọgụgụ nke implants chọrọ na-ekpebi ọnụ ọgụgụ nke ezé efu na kpọmkwem ebe ezé emetụta.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ntinye n'otu n'otu nwere ike ọ gaghị adị mkpa maka ihe omume na ezé dị n'akụkụ ibe ya.
3. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Ngwunye zuru ezu
Site n'ọganihu nke dọkịta eze, ọtụtụ ndị ọrịa nwere ike dabara maka ezé ezé nke a na-akwado ma ọ bụ tinye ọnụ n'ụzọ zuru ezu.
Ọnụ ego nke ụdị mkpuchi eze a na-akwado ịkụnye ihe nwere ike ịdị n'etiti $7,000 na $90,000. Ọnụ nke etinyere eze n'uju bụ ihe ruru $34,000.
Anyị ga-akwụ otu n'elu ma ọ bụ ala set nke eze eze n'etiti $ 3,500 na $ 30,000.
Ihe nkwụnye eze nke zuru oke ọnụ siri ike ma dị nchebe. N'adịghị ka eze eze ọdịnala, ha anaghị achọ iji nrapado mee ihe.
Dọkịta eze na-atụkarị aro ka etinye ụdịrị a n'ọnọdụ ebe onye ọrịa nwere ezé dị iche iche n'usoro.
A na-agbakwunye ihe ntinye naanị mgbe ewepụchara ezé. Iwepụ ezé nwere ike ịbawanye ọnụ ahịa usoro a dum.
Ntụnye eze zuru oke maka ọnụ na-adị ka eze ezé mana ọ nwere ike ịdị oke ọnụ. Ụdị ezé nke na-adịgide adịgide na-aga n'ihu na-ewu ewu n'ihi uru.
Otu esi enweta ụlọ ọgwụ eze n'efu
Enwere ụlọ ọgwụ eze n'efu na nke na-amị amị n'ụwa niile. Naanị ihe ị chọrọ bụ ịmara ebe ha nọ na nke ahụ nwere ike bụrụ ihe ịma aka.
Ụzọ dị mfe isi bido bụ ịchọ ebe nchekwa data dị n'ịntanetị maka ụlọọgwụ ahụike eze n'efu dị ka ndị webụsaịtị ndị a na-enye:
Ụzọ ndị ọzọ bụ:
1. Free Dental Clinic Near Me 2022: Site Free Dental Clinic na Clinical Ọnwụnwa
Ụlọ ọrụ ahụike ndị akwadoro na-eme nnwale ụlọ ọgwụ, dị ka National Institute of Dental and Craniofacial Research tupu ọgwụgwọ ma ọ bụ ọgwụgwọ na-enweta ọha na eze.
Ọ bụ ezie na ọ nweghị ọgwụgwọ nwere ike ịbụ 100% ijide n'aka na ọ ga-abụ 100% nnwale ụlọ ọgwụ nwere nchekwa nke ọma. N'ihi na tupu enwee ike nyochaa usoro ọhụụ ọ bụla n'ihe gbasara mmadụ, ọ ga-enwerịrị nyocha ụlọ nyocha ọtụtụ afọ.
Na mgbakwunye, Congress gafere iwu na-enye nchebe maka ndị na-amụ ihe ma hụ na nchekwa ha.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ eze mgbe nile dị ka nhicha na nlele anya ị gaghị achọ ka ị debanye aha maka nnwale nnwale ebe enwere ọtụtụ nhọrọ enweghị ọnụ na ọnụ ala.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụgwọ dị mgbagwoju anya na nke sara mbara, dị ka ịwa ahụ ma ọ bụ ntinye nke a nwere ike ịbụ nhọrọ iche echiche.
Ọ ga-ekwe omume nyochaa ụdị nnwale ndị a na-enye ebe a.
2. Free Dental Clinic Ịkwụ ụgwọ
Ego mgbazinye eze abụghị n'efu mana ha nwere ike inye aka kwụọ ụgwọ maka ọrụ ịchọrọ n'ihu. A na-akwụghachi mbinye ego ahụ na nkeji nkeji ka oge na-aga n'ozuzu ya na ọmụrụ nwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ eze mgbazinye ego mgbe ahụ i kwesịrị ime ka ojiji nke Igwe nchọta SuperMoney maka mgbazinye ego ịchọta nke dabara gị mma.
Chọta mbinye ego ọnụ
3. Free Dental Clinic si Ndị na-ahazi ọrụ na-abụghị ọrụ
Enwere ọtụtụ ndị anaghị akwụ ụgwọ n'ofe obodo ahụ na-enye gị ohere ịnweta ọrụ eze na-akwụghị ụgwọ, ọkachasị maka mmezi oge niile dị ka nlele na nhicha.
Ụlọ ọgwụ kacha elu na nhazi nke nwere ụlọ ọgwụ eze efu
N'okpuru bụ ebe ịnweta Ụlọ ọgwụ eze efu:
1. Ụlọ ọgwụ eze efu n'efu dị nso m 2022: Ozi ebere
Missions of Mercy (MOM) malitere ọrụ na 2003.
Ha na-achịkọta ọtụtụ puku ndị dọkịta ezé kwa afọ iji guzobe ụlọ ọrụ eze nwa oge n'ọhịa nke na-elekọta ndị nọ ná mkpa, nke gụnyere ụmụaka na ndị okenye.
Enwere MOM n'ofe steeti dị iche iche. Ị nwere ike ịchọpụta ma ọ dị na steeti gị site na ịga na Weebụsaịtị American Dentist Care Foundation ebe a.
2. Nye ụmụaka ọnụ ọchị
Nye ụmụntakịrị ọnụ ọchị (otu American Dental Association na-agba GKAS.
Enwere mmemme GKAS kwa afọ n'ime afọ niile, ebe ọtụtụ puku ndị ọrụ afọ ofufo na ndị dọkịta ezé na-enye ọzụzụ n'efu gbasara ahụike ọnụ, nyocha ahụike, na ọgwụgwọ ụmụaka ndị bi na mpaghara na-adịghị mma.
Maka ozi gbasara otu esi elekọta nwa gị na GKAS, ị nwere ike gaa na webụsaịtị GKAS.
3. Ọrụ eze nyere onyinye
Onyinye Dental Services (DDS) na-enye ọgwụgwọ eze n'efu maka ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ ndị ọkachamara ahụike lere anya dị ka ndị na-esighi ike yana ndị okenye.
DDS na-arụ ọrụ na steeti niile Ọ ga-ekwe omume ịchọta mmemme DDS steeti site na ịga na webụsaịtị ha ebe a.
4. Ụlọ ọrụ nlekọta ndị dọkịta ezé nke America
Otu mba anaghị akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ site na isi ụlọ ọrụ ya na Kansas mana ha na ndị otu ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ n'ofe obodo ahụ.
Ha na-akwadokwa ụlọọgwụ ọrụ ebere na-enye ọrụ efu na ụgwọ dị ọnụ ala n'ofe mba ahụ Ha na-enyekwa ndị agha agha ụlọ ọgwụ zuru oke.
Gaa ha kalenda ebe a iji chọpụta ma enwere mmemme nlekọta ụmụaka n'efu na-abịa na mpaghara mpaghara gị.
5. Nyeghachi ọnụ ọchị
Nyeghachi Smile na-enye nlekọta eze n'efu maka ndị a kpagburu onwe ha n'ụlọ.
A na-ahụ maka mmemme a site na American Academy of Cosmetic Dentistry Charitable Foundation ma na-enyere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị merụrụ ahụ mmerụ ahụ eze n'ihi nwunye, onye òtù ọlụlụ, ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ.
Ha na-enyekwa ọgwụgwọ eze yana ọrụ nrụzigharị maka ma ụmụ nwanyị ma ndị nwoke nwere mmerụ ahụ eze n'ihi mwakpo mmekọahụ. gaa Leta ibe weebụ ebe a ịmụtakwu banyere mmemme.
Ụlọ ọgwụ eze efu Ilekọta ndị kwabatara
Enwekwara nlekọta ụlọọgwụ eze n'efu maka ndị kwabatara.
Ndị mbata na-aga n'ihu inweta akwụkwọ ikike obibi ha nwere ike ihu ihe isi ike n'ịchọta dọkịta eze nwere onwe ma ọ bụ ụlọọgwụ n'ihi na ha enweghị ike ịnweta mmemme gọọmentị dịka Medicaid.
Gị ma ọ bụ onye maara nọ n'ọnọdụ a, lelee ọrụ ndị a na-enye Mbata na ọpụpụ ozi. Ị nwere ike ịchọ ụlọ ọrụ ndị a ma ama nwere ike inye aka ijikọ gị na enyemaka ị chọrọ.
Ụlọ ọgwụ eze mberede na-akwụghị ụgwọ
Na mbụ, ọ bụrụ na ị na-enweta ihe mberede na ezé gị, ọ kacha mma ịga leta ụlọ ọgwụ mberede eze. Ụlọ ọrụ mkpuchi eze gị ga-ahụ maka usoro a.
Ọ bụrụ na ị adịghị mkpuchi yana ego ezinụlọ gị erughị nke ọkwa ịda ogbenye nke Federal, mgbe ahụ ị nwere ike ị tozuo itinye Medicaid iji kpuchie mmefu maka ihe mberede site na ọnwa atọ gara aga.
Ụzọ kachasị dị irè iji tinye maka nke a bụ iji enyemaka nke onye na-anya ụgbọ mmiri mkpuchi ahụike na-adịghị ọnụ ma ọ bụ onye enyemaka mkpuchi ahụike.
Ha ga-enyere gị aka n'imejupụta ngwa na-enweghị njehie ka ị nwee ike nweta enyemaka iji kpuchie mmefu gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ngwa ngwa.
Iji chọta onye ndụmọdụ nso gị, lelee ya weebụsaịtị Healthcare.gov ebe a.
Ọ bụrụ na ị na-achọ, jide n'aka na ị họrọ nhọrọ 'enyere' ma ọ bụ 'navigator' nhọrọ. Ndị na-ere ahịa na ndị nnọchi anya abụghị maka n'efu ma na-enyekarị aka mgbe ị na-etinye akwụkwọ mkpuchi nke onwe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụgwọ eze ngwa ngwa, agbanyeghị, ọ bụghị ihe mberede, ị nwere ike lelee ọdụ data ọ bụla anyị depụtara n'elu iji chọta ụlọọgwụ n'efu na mpaghara gị. Anyị nwekwara ntuziaka ọzọ na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ya ụlọ ọgwụ mberede eze.
akụrụngwa ọgwụgwọ eze n'efu
Enwere ọtụtụ ozi n'ime akụkọ a, anyị achịkọtala isi mmalite niile anyị kwurula dị ka tebụl n'isiokwu a:
Onye tozuru oke?
Nọmba ekwentị ma ọ bụ weebụsaịtị
United Way n'ụwa niile Onye ọ bụla 2-1-1
Ụlọ ọrụ maka ahụike Onye ọ bụla Chọta ebe ahụike
Medicaid Ụmụaka na ndị okenye nọ n'okpuru ndị nọ n'okpuru ọkwa ịda ogbenye nke Federal Debanye aha na Medicaid
Lọ akwụkwọ eze Onye ọ bụla Chọta ụlọ akwụkwọ ahụike eze kacha nso.
Enweghị ọnụ ụlọ ọgwụ Onye ọ bụla (ma eleghị anya ndị nwere ego chọrọ) Dentalassistance.us na freedental.org
Ọnwụnwa ahụike ndị okenye Chọta ohere iji nwaa
Ozi ebere Onye ọ bụla Chọọ ihe omume
Nye ụmụaka ọnụ ọchị Children Chọta mmemme GKAS kwadoro.
Ọrụ eze nyere onyinye Ndị agadi ochie, yana ndị a na-ewere dị ka ndị na-adịghị ike ahụike Chọta mmemme steeti gị
Ụlọ ọrụ nlekọta ndị dọkịta ezé nke America Ndị okenye, ndị agha agha na ụmụaka Chọta ihe omume
Nyeghachi ọnụ ọchị ndị lanarịrị ime ihe ike n'ụlọ na mwakpo mmekọahụ Rịọ nlekọta
maka ndị kwabatara Ndị mbata nke afọ niile, gụnyere ụmụaka na ndị okenye. Chọta isi mmalite
Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, ndị enyemaka na ndị ọkachamara ahụike Onye ọ bụla Chọta onye enyemaka
Ajụjụ gbasara nlekọta eze efu
N'okpuru bụ ụfọdụ ajụjụ gbasara ụlọ ọgwụ eze efu:
1. Kedu otu m ga-esi nweta nlekọta eze efu?
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwepụ ezé n'efu ma ọ bụ naanị ịchọrọ oge maka ule eze Lelee ihe omume anaghị akwụ ụgwọ, ụlọ ọgwụ eze n'efu yana ụlọ akwụkwọ eze na ule ụlọ ọgwụ.
2. Ụlọ akwụkwọ eze na-enye ọgwụgwọ eze n'efu?
Ụlọ akwụkwọ eze na-enye ohere ịnweta ọgwụgwọ eze n'efu. Ụmụ akwụkwọ eze na-adị njikere ịbanye n'ụwa n'ezie dị ka ndị dọkịta ezé nwere ikikere ga-enwe ike ilekọta ezigbo ndị ọrịa iji mezuo ogo ha chọrọ.
Ọ bụrụ na ị na-aga eze ụlọ akwụkwọ na-enweta dịghị eri ma ọ bụ na a ọnụ ala eze ọgwụgwọ ụmụ akwụkwọ ga-eme usoro, Otú ọ dị, ha ga-elekọta mgbe niile site a ruru eru, ikikere eze onye ga-hụ na ị na-elu-edu. nlekọta eze.
3. Ebee ka m nwere ike ịwepụ ezé m n'enweghị ọnụ ahịa?
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ eze n'efu, gaa na ụlọọgwụ ahụike mpaghara gị ma ọ bụ ekwentị United Way Worldwide (2-1-1) wee jụọ maka ịwepụ ezé n'efu na mpaghara gị.
Ha ga-enwe ike ime ka ndị mmadụ kpọtụrụ maka ọrụ eze mberede ma ọ bụ gwa gị ma enwere ụlọọgwụ eze n'efu maka ndị okenye yana ụmụaka nọ na mpaghara ị bi.
Ọrụ eze n'efu anaghị adị ngwa ngwa n'agbanyeghị, ọ dị ebe ahụ.
Enwere ọtụtụ ohere ị ga-elele maka nlekọta eze n'efu, dịka ụlọọgwụ ahụike mpaghara, ule ụlọ akwụkwọ eze na-anaghị akwụ ụgwọ, yana na steeti ụfọdụ, Medicaid.
Ebe kacha mma ịmalite ọchụchọ gị bụ ịkpọ 1-2-1-1 iji ruo United Way n'ụwa niile. Ụlọ ọrụ ahụ ga-akpọtụrụ gị ụdị enyemaka ọ bụla ịchọrọ.
A na-enwekarị ụlọọgwụ na mmemme na-anaghị akwụ ụgwọ n'ime afọ niile, nke ndị otu na-anaghị akwụ ụgwọ na-akwado, dị ka Nye Kids a Smile or Missions of Mercy, ebe ị nwere ike lelee ahụike gị kwa afọ.
Ndị ọrụ afọ ofufo nke mmemme ahụ ga-enyere gị aka ịchọta ebe obibi eze kwesịrị ekwesị - dọkịta eze dị gị nso, onye nwere ike ịnye ọgwụgwọ ị nwere ike ime ka ị nwee ike ịga na-aga mgbe niile maka nyocha na oge.
A na-enwekarị ihe mgbochi n'inweta ọgwụgwọ, ma ebe ọ nwere ọchịchọ, a na-enwe azịza, na ahụike ọnụnụ kwesịrị ịbụ ihe kacha mkpa maka mmadụ niile.
Anyị nwere olileanya na nke a baara gị uru. Ọ dị mma ịhapụ ikwu ma kesaa ndị ọzọ akụkọ a. Ọzọkwa, tụlee ịdenye aha, ka a ga-amara gị ọkwa maka ọhụrụ posts.
Tags:ụlọ ọgwụ eze dị m nso, ụlọ ọgwụ eze dị m nso, ụlọ ọgwụ eze obodo n'efu n'akụkụ m, nlekọta eze n'efu maka obere ego, ụlọ ọgwụ eze efu maka ndị okenye, ụlọ ọgwụ eze efu maka ndị okenye nọ m nso, kedu ka m ga-esi nweta ọrụ eze n'efu na texas, otu esi enweta mmezi eze n'efu
Ihe kacha mma maka ihu 2022 na ụdị anụ ahụ niile na uru ha dị ịtụnanya
Ọtụtụ ụzọ ị nwere ike iji alum maka ebumnuche ịkpa ahụ